Duub caag ah
Faahfaahinta foostada rullaluistemka daboolan: Kadib sameynta rullaluistemadka, ee loogu talagalay baahiyaha miridhkiisa, ka hortagga daxalka iyo taageerada, waxay sidoo kale u baahan tahay daaweyn dusha sare ah ama daahan, sida rinjiyeynta, galvanizing, Xereen Teflon, daahan caag ah, dahaadhka chromium, buufinta dhoobada iyo qayilo. Marka loo eego cabbirka, waxaa jira baaxad weyn sida mashiinka mashiinka warqad sameynta ah (dhererku wuxuu gaari karaa in ka badan 10 mitir, dhexroorku waa ka badan yahay 1500 mm), waxaa jira baaxad-yar-yar sida isku-xirnaanta xarig-isku-xidhka otomaatiga ...
Astaamaha rullaluistemadka PVC 1. Wareejiyaha wareejinta (wareejinta rullaluistemadka) wuxuu ku habboon yahay inuu gudbiyo dhammaan noocyada sanaadiiqda, bacaha, rugaha, iwm. Alaabada waaweyn, waxyaabaha yaryar ama waxyaabaha aan caadiga ahayn ayaa loo baahan yahay in lagu qaado Gaadiid ku yaal sariiradaha ama sanaadiiqda wareejinta. 2. Waxay qaadi kartaa hal shey oo culus ama waxay qaadi kartaa culeys weyn oo saameyn ah. 3. Qaab dhismeedku waa kala duwan yahay. Qadka wadada waxaa loo qaybin karaa qadka awooda wadada iyo qadka socodka wadada ee aan korontada ku xirnayn iyadoo la raacayo habka wadista, waxaana loo qaybin karaa conveyi jiifa ...
Rullaluistemadka silsiladda laba-geesoodka ah, noocyo kala duwan, xulasho, ayaa loo habeyn karaa iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha. Aad baa loo adeegsadaa. Daabacaadda duubista, sida daabacaadda wargeysyada, waa geedi socod xawaare sare leh oo soo saari kara in ka badan 6000 yaard oo dhar daabacan saacaddiiba. Habkan waxaa sidoo kale loo yaqaannaa daabacaadda farsamada. Daabacaadda duubista, qaababka ayaa lagu daabacaa dharka iyadoo lagu xardhay rollers naxaas ah (ama rollers). Durbaanka Copper waxaa lagu xardhi karaa khadadka aadka loo habeeyay ee aadka loo habeeyay, kaas oo la daabacan karo oo aad u faahfaahsan, jilicsan p ...
Rullaluistem aan awood lahayn
Rullaluistemadka awooddu waa qayb duudduuban oo wareegaysa taas oo kaxaynaysa suunka gudbiyaha ama beddelaysa jihada ay ku socoto Waxaa loo qaybin karaa laba nooc: rullaluistemadka wadista iyo isteerinka gawaarida. Qalabka duubista ayaa ah qaybta ugu weyn ee lagu wareejiyo awoodda. Rullaluistemadka awoodda wadista waxay u qaybsan tahay hal duudduuban oo awood leh (xagalka duubista ee suunka ilaa rullaluistemadka awoodda ayaa ka hooseeya 200 ° ilaa 230 °), rullaluistemadka awoodda badan (guud ahaan loo isticmaalo awoodda sare) iyo rullaluistemadka labanlaabka 350 °). Shuruudaha ...
Waxyaabaha isdabajoogga ah ee isdabajooga alaabada Sharaxaadda Wax soo saarka: waxay ku habboon tahay gudbinta dhammaan noocyada sanaadiiqda, bacaha, rugaha, iwm. Alaabada waaweyn, maqaallada yar yar ama maqaallada aan caadiga ahayn waxay u baahan yihiin in lagu qaado santuuqyada ama sanaadiiqda wareejinta. Waxay qaadi kartaa hal shey oo culus ama waxay qaadi kartaa culeys weyn. Qaab dhismeedka: sida ay wadista wadista, waxaa loo qaybin karaa line rullaluistemadka awood iyo line a rullaluistemadka aan awood, sida ay qaabka, waxaa loo qaybin karaa line rullaluistemadka gaadhsiin siman, con u janjeera ...
Wax soo saarka ee rullaluistemadka square inta badan ka kooban jeedin hore ee jidhka rullaluistemadka, dheelitirka bilowga ah ee ma guurto ah, dhexda faragelinta iyo alxanka madaxa usheeda dhexe, jeestay ganaax iyo dheelitirka firfircoon ganaax. Haddii dulqaadka dabeecadda, sida wareegga, silsiladda iyo toosnaanta, looga baahan yahay inuu ka yaraado 0.2mm, Mashiinka sare ee silsiladda ama mashiinka duudduuban ayaa loo baahan yahay inuu shiido markuu dhammeeyo ka dib. Haddii loo baahdo adkaanta dusha sare, habka daaweynta kuleylka waa in lagu daraa. Ka dib markii rullaluistemadka la fo ...
Ahama gudbiye rullaluistemadka birta ahama iyo mashiinka jeestay durbaan leeyihiin faa'iidooyinka qaab fudud, isku halaynta sare iyo dayactirka ku habboon. Hawlahani waxay kuu keeni karaan faa'iidooyin ganacsi oo waaweyn, si aad u fahamto shaqadeeda gaarka ah. Khadad duuban ayaa loo adeegsadaa isku xirnaanta fudud iyo kala sifeynta u dhexeeya gawaarida. Waxay abuuri kartaa nidaam gaadiid saad adag leh oo leh khadad duuban oo badan iyo qalab kale oo gaadhsiiya ama mashiinno gaar ah si loo buuxiyo shuruudaha geeddi-socodka ee kala duwan. Isku duubnaanta ...
Nooca korantada wuxuu la xiriiraa rullaluistemadka caagga ah, oo ka kooban dhululubada, daboolka dhammaadka, wiishka rullaluistemadka, baabi'inta buuqa iyo aaladda kuleylka kuleylka iyo aaladda korontada ka saarta. Mashiinka duubku waa dhululubad, silsiladuna waa dhululubbo bannaan, silsiladdu waxay ku duudduuban tahay dhinaca kore ee usheeda dhexe, daboolka dhammaadka waxaa loo habeeyay labada dhinac ee silsiladda, qaababka gudaha ee daboolka dhammaadka labada dhinacba waa kuwo iswaafaqsan, saa'idka ayaa kuxiran gudaha sitaarada ...